यो अनौठो बच्चालाई हेर्न लाग्छ हज्जारौ मानिसहरुको भिड, वास्तविकता थाहा पाउदा जो कसैको आखा रसाउछ – Wow Sansar
यो अनौठो बच्चालाई हेर्न लाग्छ हज्जारौ मानिसहरुको भिड, वास्तविकता थाहा पाउदा जो कसैको आखा रसाउछ
February 7, 2021 56
एजेन्सी । भारतको इलाहाबादमा ३ वर्षको एक बालकलाई मानिसहरुले बजरंगबलीको नामबाट बोलाउने गर्छन । इलाहाबाद (यूपी) भारतको इलाहाबादमा जन्मिएका ३ वर्षको बालकको जन्मदा नै पुच्छर निक्लीएको छ ।
यसलाई मानिषहरुले ईश्वरीय चमत्कार मानेर उसलाई बजरंगबलीको नामबाट बोलाउने गर्दछन । उसलाई हेर्नका लागि धेरै टाठाबाट मानिषहरु आउने गर्छन । त्यो बालकको आमाले भन्ने गर्छिन ’’
मेरो श्रीमान पहिले अपरेशन गर्नका लागि राजी हुनुहुन्थेन तर पछि जब मेरो श्रीमान राजी हुनुभयो तव परिवारमा सबैलाई विसन्चो हुन थाल्यो । यस्तोमा अपरेशन गर्न डर लाग्छ , कि हामी कुनै समस्यामा न परौं ‘ मानिषहरुले बोलाउने गर्छन बजरंगबली‘
यो कुरा कौंधियारा विकास खंड कुकुढ़ी गाउँ भारतको हो । कुकुढ़ी गाउमा बस्ने रामसुंदर यादवको विवाह मई २०११ मा कविता यादवसंग भएको थियो । २ अक्टूबर २०१४ मा उनीहरुको छोरा कृष्णाको जन्म भएको थियो ।
कृष्णाको पिठ्यूमा कम्मर नजिक एउटा मासुको टुक्डा बाहिर आएको छ । शुरूमा परिवारबा सदस्यहरुले ध्यान दिएन्न तर बच्चा जब ठुलो हुन थाल्यो उसको उमेरसंगै त्यो मासुको टुक्राको आकार पुच्छर्र जस्तो हुन थाल्यो ।
कृष्णाको आमा भन्छिन ’’श्रीमान दिल्लीमा प्राइवेट जब गर्नुहुन्छ त्यसैले धेरै कम मात्रामा घर आउनुहुन्छ । उहाले पहिले अपरेशन गर्नका लागि सहमति दिनुभएको थिएन तर पछि सहमति दिँदा कुनै न कुनै प्रकारको रुकावट र समस्या आउने गर्छ ।
कृष्णाका छिमेकी सुनील कुमारका अनुसार, ’पूंच्चछर भएको हुनाले हामीहरु बच्चालाई बजरंगबली भनेर बोलाउने गर्छौं । कृष्णालाई हेर्नका लागि धेरै टाढा टाढाबाट मान्छेहरु आउने गर्छन , यसैका कारण मानिसहरुले हाम्रो गाउलाई पनि चिन्न थालेका छन ।
डाक्टरका अनुसार , (एस आर एन हस्पिटलका डा. विपुल कुमारका अनुसार , ’’ये हार्मोनल प्रब्लम हो , १०,२० हजार मानिषमा एक केस यस्तो हुने गर्छ , यो समस्या धेरै रेयर हुन्छ तर कुनै प्रकारको खतराजनक भने हुदैन । नर्मल अप्रेशनबाट यसलाई हटाउन सकिन्छ , यदि नर्मल अप्रेशनबाट पनि यो निको भएन र फेरी बढन थाल्यो भने भित्रि अप्रेशन गर्न पर्छ जुन क्रिटिकल पनि हुन सक्छ ।
Prevनेपालमै यस्तो चलन जहाँ मान्छेको माशु काटेर गिद्धलाई ख्वाउँदा परिवार खुशी !
कोरोना संक्रमणबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना अधिकृतको निधन
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3460)